သူတို့ ပြောပုံ - ၅
ချမ်းသာသူများက ညစာတစ်ပွဲကို ငွေလေးငါး ခြောက်သောင်း အကုန်ခံ၍ စားနေကြရာ ဆင်းရဲ သူများမှာမူကား ပေါင်းမုန့်သိုး ကလေးများမှ ဝဝမစားရ ဖြစ်နေလေသည်။ ဤသို့ မညီမမျှ လူ နှစ်ပိုင်း ကွဲနေသော်လည်း အားလုံး အရုပ်းဆိုးလျက် ရှိကြသည်။ ချမ်းသာသူများမှာ ငွေရဖို့ ဇိမ်ခံ ဖို့လောက်နှင့် အချိန်ကုန်နေသည်။ ဆင်းရဲသူများမှာ ဝမိးဗိုက်ကလေး ပြည့်ဖို့ အရေးနှင့် အချိန် ကုန်နေသည်။ ဤလောကကြီးကား နေပျော်အောင် လုပ်ရမည့် လောကကြီး၊ နှလုံးမွေ့လျော် ပျော်ဖွယ်ရာ လှပတင့်တယ်အောင် ပြုရမည့် လောကကြီး ဖြစ်စေရမည်ဟု မည်သူမျှ စိတ်မကူး မိကြချေ။
(ဇေယျ၏ မြန်မာ့မျက်ပွင့် - စာဓလေ့၊ စာ-၃ဝ)
Non-violence is his (Buddha's) Doctrine. One who has faith in him and follows him, always speaks of non-violence. Working ever for others' welfare, Buddha attains enlightenment. Being non-violent, he always acts in the virtuous way. He teaches also his followers to act for the welfare of others. One listening to his words - be oneabrāhmana or samaṇa - can never find any harm in these.
(Tāranātha, History of Buddhism in India, p. 40.)
သူတို့ ပြောပုံ - ၄
ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မ(အဆုံးအမ)ကား အကြမ်းမဖက်ခြင်းတည်း။ ဗုဒ္ဓအား ယုံကြည် လိုက်နာကျင့်သုံးသူသည် အကြမ်းမဖက် ခြင်းကို ထာဝစဉ် ပြောဆို၏။ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဗုဒ္ဓသည် ဗောဓိဉာဏ်ကို ရရှိ၏။ အကြမ်း မဖက်ခြင်း၌ ဗုဒ္ဓသည် အမြဲတမ်း ကောင်းမြတ်သော နည်းလမ်းဖြင့် ပြုမူ၏။ ဗုဒ္ဓသည် တပည့် သာဝကများအားလည်း သူ တစ်ပါး၏ ကောင်းကျိုးကို ဆောင်ရွက်ရန် သင်ကြားပါ၏။ ရဟန်းဖြစ်စေ ပုဏ္ဏားဖြစ်စေ ဗုဒ္ဓ၏ စကားတော်များကို ကြားနာရ သူသည် ထိုစကားတော်များ၌ မည်သည့် (သူတစ်ပါး) နာကျင်စေရန် (သင်ကြားမှုမျိုး)ကိုမျှ ရှာတွေ့နိုင်မည် မဟုတ်။
(တာရနာထ၏ အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်း၊ စာ-၄၀))
The prestige you acquire by being able to tell your friends that you know famous men proves that you are yourself of small account.
(W. Somerset, Maugham, The Summing Up, p. 7.)
သူတို့ ပြောပုံ - ၃
နာမည်ကြီးသူတွေကို သိပါတယ်လို့ သင့်မိတ်ဆွေတွေကို ပြောနိုင်လို့ ရရှိတဲ့ (သင့်ရဲ့) ဂုဏ်သိက္ခာဟာ သင့်ကိုယ် တိုင်ကျတော့ အသုံးမကျသူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြတာပဲ။ (ဆမ္မားဆက်မော်)
Oprah Winfrey : What is your definition of God? Do you have one?
Jack Kornfield : I don't intend to use the word God because it gets confused with all these images of Sistine Chapel guy with the beard and musculine and I rather use .. Emm .. the world is holy and scared. And the spirit that brings this world and galaxy into being .. that mysterious sprit and which brings us to life. If I were to use something for God, it will be that holly scared spirit that infuses everything. That is everything.
သူတို့ ပြောပုံ - ၂
(အိုပရာ ၀င်းဖရေး) : ဂေါ့ဒ် (ဖန်ဆင်းရှင်)ကို ရှင် ဘယ်လို နားလည်ပါသလဲ။ ရှင့်မှာ ဂေါဒ့် ရှိလား။
(ဂျက်ခ် ကွန်ဖီးလ်) : ဂေါ့ဒ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျုပ် မသုံးချင်ဘူး။ ဘာလို့ဆို ဘုရားကျောင်းထဲက မုတ်ဆိတ်မွှေးနဲ့ ယောက်ျားပုံ ပန်းချီ ရုပ်တုတွေနဲ့ ရော သွားမှာ မို့လို့ပါ။ ကျုပ် သုံးချင်တာက .. အင်း .. ကမ္ဘာလောကဟာ စင်ကြယ် လေးနက်တယ်ဗျ။ ဒီတော့ ဒီကမ္ဘာလောကရယ်၊ ဂယ်လက်ဆီနဲ့ ကျုပ်တို့ သက်ရှိတွေရယ်ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ spirit (လို့ သုံးချင်တယ်)။ ကျုပ်အနေနဲ့ ဂေါ့ဒ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးအတွက် တစ်ခုခုကို သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် အရာခပ်သိမ်းကို ရှင်သန်စေတဲ့ သန့်ရှင်း နက်ရှိုင်းတဲ့ အဲဒီ spirit (ဆိုတဲ့ စကားလုံး)ကို သုံးမှာပဲ။ အဲဒီ (spirit) ဟာ အရာ အားလုံးပဲ။
(နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ တီဗွီအစီအစဉ် တင်ဆက်သူ၊ သန်းကြွယ် သူဌေးမ အိုပရာဝင်ဖရေးက ဗုဒ္ဓဝါဒီ ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီး ဂျက်ခ်ကွန်ဖီးလ်ကို မေးတာပါ။ နှစ်ယောက်လုံး အမေရိကန်လူမျိုး။ အိုပရာနဲ့ အမေရိကန် တီဗွီကြည့် ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ spirit ဆိုတာကို ခရစ်ယန်တို့ရဲ့ သုံးမျိုးတစ်ဆူ ဘုရားထဲက သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်လို့ နားလည်သွားပြီး အဖြေကို ကျေနပ်နိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒီတွေ အနေနဲ့လည်း spirit ဆိုတာကို အပူ အအေး စသည်ကြောင့် ဖောက်ပြန်တဲ့ သဘာဝတရား သို့မဟုတ် သဘာဝရဲ့ ရွေးချယ်မှုလို့ နားလည်လိုက်ရင် အုပ်စု နှစ်ခုလုံးနဲ့ ဒဲ့ကြီး မဆန့်ကျင်နိုင်ဘူး။ ဒီဆရာကြီးက မြန်မာနဲ့ ယိုးဒယားမှာ ရဟန်းဝတ်နဲ့ နှစ်ပေါင်း အကြာကြီး ဝိပဿနာတရား အားထုတ်ခဲ့သူပါ။)
Oprah Winfrey : What is the soul?
Jack Kornfield : Now, you are asking the mysterious and wonderful question. Emm .. I will do this. When I look at the mirror, I noticed that I aged. Right? A few more wrinkle, lost the .. (petting gesture on the head) fur up here, whatever.
Oprah Winfrey : I do too!
Jack Kornfield : That's not who you are, that body. Who you are is the spirit that was born in this body. Who you are is the sprit that hearing that these words and sensing the Hawaiian tropical breeze. And who you are is timeless and unborn and not limited by this body and mind. And if you want to use the word soul for that, that will be fine.
Oprah Winfrey : haha (chuckled) I love that!
သူတို့ ပြောပုံ - ၁
(အိုပရာ ၀င်းဖရေး) : soul (ဝိညာဉ်ကောင်) ဆိုတာ ဘာလဲ။
(ဂျက်ခ် ကွန်ဖီးလ်) : ဒီတစ်ခါ ခင်ဗျား ဖြေရခက်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းကို မေး တာပဲ။ အင်း .. ဒီလို ပြောမယ်။ ကျုပ် မှန်ကိုကြည့်တော့ ကျုပ် အိုပြီ။ ဟုတ်လား။ (ကိုယ်ရေပြားတွေ) အများကြီးရှုံ့နေပြီ။ (ဦးခေါင်းကို ပွတ်သပ်လျက်) ခေါင်းမှာ ဆံပင် မရှိတော့ ဘူး။
(အိုပရာ ၀င်းဖရေး) : ကျမလည်း ဒီလိုပါပဲ။
(ဂျက်ခ် ကွန်ဖီးလ်) : အဲဒီ (မှန်မှာ တွေ့ရတဲ့) ခန္ဓာကိုယ်က သင် မဟုတ်ဘူး။ သင်ဆိုတာက ဒီခန္ဓာကိုယ် (နှင့်အတူ) မွေးဖွားတဲ့နာမ်တရား၊ ကျုပ်ရဲ့စကားသံကို ကြားနေတဲ့ ပြီးတော့ ဟာဝိုင်ယီရဲ့ အပူပိုင်းရနံ့ကို သိနေတဲ့ နာမ်တရား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနာမ်တရားဟာ အဆုံးမရှိ အစမရှိ။ သင်ဆိုတာကို ဟောဒီရုပ်နာမ်(ခန္ဓာ)နဲ့ ကန့်သတ်မထားဘူး။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ အဲဒီ (အဓိပ္ပာယ်)နဲ့ soul ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးလိုရင် ရနိုင်ပါတယ်။
(အိုပရာ ၀င်းဖရေး) : (ရယ်လျက်) ကျမ ရှင့်အဖြေကို နှစ်သက်ပါတယ်။